Mogadishu Journal » 2021 » March » 30
Muqdisho:-Ra’iisul Waasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Wakiillada Beesha Caalamka u jooga Soomaaliya oo ay ka wada hadleen dardar gelinta iyo dhammeystirka arrimaha doorashooyinka dalka, si waafaqsan heshiiskii...
US is averaging 63,000 new daily infections as of Monday, as coronavirus vaccine distribution continues. 30 Mar 2021 A top health official in the United States has warned of “impending doom” amid rising cases of COVID-19, even as the country continues to outpace expectations...
Saraakiil ka socota Dowladda Federaalka Soomaaliya oo shir looga hadlayo Caqabadaha xaduudaha, xalinta khilaafaadka iyo maareynta isticmaalka hubka fudud uga qeyb galay dalka Uganda. Shirkaan oo ahaa mid heerkiisu sareeyo ayaa waxaa looga hadlayay faafista iyo maareynta...
Diidiin tiro badan oo si sharci daro ah loo dhoofinayay oo gacanta lagu dhigay (Sawirro)
Garoon diyaaradeed oo kuyaala jasiiradda ee Baltra ee dalka Ecuador, ayaa lagu qabtay ku dhawaad 200-diindiin aad u yar yar oo la doonayay in si sharci daro ah loo dhoofiyo loogana ganacsado. Diindiinkan oo ahaa kuwa aad u yar yar ayaa lagu soo cabeeyay boorso weyn iyadoo lagu...
Dowladda Sudan iyo koox mucaarad ah oo weyn oo ka dhisan buuraha koonfureed ee Nuba ayaa Axaddii kala saxiiday dokument dhabbaha u xaaraya heshiis kama dambeys ah, oo dhammaan dadka siinaya xorriyad caabudid, islamarkaana kala saaraya diinta iyo dowladda. Saxiixan ayaa loo arkaa...